Muxuu Trump qaban doonaa marka ugu horaysa ? - BBC News Somali
Ma jiro madaxweyne mareykank soo maray taariikhda oo la mid ah Donald Trump oo ah ganacsade maalqabeen ah.
Hadaladiisa adag ee ku saabsan dadka ajnabiga ayaa kala qaybiyay waddanka iyo xitaa xisbiga uu ka tirsan yahay ee Jamhuuriga.
Qaar ka mid ah waxyaabaha uu qaban doono 100-ka maalmood ee uu xukunka hayo ayuu marar kala duwan ka hadlay.
Lix arrimood oo ku saabsan caleemo saarka Trump
In laga xayiro shaqaalaha Aqalka Cad inay ololeeyaan
In la joojiyo dhammaan lacagta la siiyay barnaamijka Qaramada Midoobay ee isbadalka cimilada
Waxaa kale ee muhiimka u ah in dib looga wadaxaajoodo heshiisyada ganacsiga sida North American Free Trade Agreement ee lala galay Canada iyo Mexico.
Wuxuu sheegay in heshiisyadan ay mas'uul ka yihiin shaqooyinka Maraykanka in dibadda la geeyo.
Qorshihii Mr Obama uu ka joojin lahaa shan milyan oo qof oo sharci la'aan ah in la musaafuriyo ayaa waxaa diiday maxkamad gobolka Texas , waana la hakiyay kadib markii maxkamadda sare ay ku kala qaybsantay. Arrintan ayaa ahayd mid ka mid ah go'aanadii uu qaatay madaxweynaha kaligiis ee aad looga soo horjeestay.
Trump wuxuu horay u ballan qaaday in bilaayiin dollar lagu maalgaliyo jidadka, buundooyinka iyo garoonada diyaaradaha. Laakiin xisbiga Jamhuuriga ayaa doonaya inay yareeyaan qarashka dowladda.